N'ogbe fencing netting waya ntupu Manufacturer na Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Fencing netting waya ntupu
Ntupu ntupu welded nwere ọtụtụ ụdị ụdị.
Ụzọ nche na-ehulata triangle n'otu ụdị ngere ntupu agbadoro.
Ọ na-ọtụtụ-eji na mgbatị ahụ, ubi, obodo ụzọ, okporo ụzọ, nche nke ụlọ wdg, ọ nwere ezigbo Njirimara nke corrosion-eguzogide, ọxịdashọn-eguzogide, ihu igwe na-eguzogide na ịka nká-na-eguzogide.
Nhazi: PVC tinye mgbe galvanized, ike fesa mgbe galvanized.
Nha nsu 1500mmx2500mm,1800mmx2500mm,2000mmx2500mm, 1000mmx3000mm, 2000mmx3000mm
Waya dia. 4mm,5mm,6mm,8mm
Ntupu oghere 50mmx100mm,50mmx200mm,75mmx150mm,100mmx200mm
Biputere Mkpesa square: 60x60mm,80x80mm
Peach ụdị post: 50mmx70mm,70mmx100mm
Mkpesa Euro: OD48mm, OD60mm
1. nsu ihe: High mma ala carbon ígwè waya, galvanized waya, nwa waya.
2. Usoro nsu: Welded ---eme folds / curves ----parkerized --- electric galvanized / hot-tipped --- PVC mkpuchi / spraying --- nkwakọ
Ngwongwo 3.fence: ike dị elu, nke na-adịgide adịgide, ikike ọdịdị ígwè dị mma, ọdịdị magburu onwe ya, ubi ọhịa nke ọhụụ, dị mfe iji wụnye, na-enwe ahụ iru ala ma na-egbuke egbuke.
4. ngere Agba: Ọchịchịrị green, blue, white, red, yellow, black, gray, or as your request.Green gbara ọchịchịrị bụ ihe kacha ewu ewu maka mbupụ.
5. welded panel nsu Ngwa: N'ihi na expressway, ụgbọ okporo ígwè, ubi nsu, ji achọ nsu, nche nsu, barbed waya nsu, wdg Kwesịrị ekwesị maka ụlọ na Njirimara, ụlọ ọrụ, ubi ntụrụndụ ebe, ogige ntụrụndụ.
Steel Grid ntupu ala, Ogwe ala nchara nchara, Igwe meghere ntupu ala, Steel ntupu grating, Steel Walkway ntupu, Ogwe ụzọ nchara nchara,